बलिउडकी नयाँ ‘रानी’ को ? ‘दीपिका कि कंगना’ - Nepal News - Latest News from Nepal
बलिउडकी नयाँ ‘रानी’ को ? ‘दीपिका कि कंगना’
बलिउड आफैमा टकरावको क्षेत्र हो । यहाँ काम गर्ने नायिकाहरुमा सधै नै बक्स अफिस लडाईले चर्चा पाउँछ । बलिउडमा नायकहरुको बाहुल्यता रहेको त सबैलाई थाहा छ । तर, अहिले, नायिकाहरुको चलचित्रले समेत बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरिरहदा चर्चा हुनु स्वभाविक नै हो ।
यसैले, बलिउडकी ‘रानी’ बन्नका लागि कंगनाले दीपिकालाई सधै नै रोकेको विश्लेषण गरिएको छ ।
साहरुखले सार्वजनिक गरे सलमानको चलचित्रको फस्ट लुक
यो हो स्वर्ग जाने भर्याङ, चढ्न मनाही छ